Sunday April 08, 2018 - 21:47:19 in Wararka by Super Admin
Khilaafka u dhaxeeya hoggaanka dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa markale sii laba kacleeyay kadib markii ay fashilmeen dhammaan dadalladii ladoonayay in khaliifka lagu qaboojiyo.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Max'med Cismaan Jawaari oo ku magacaaban guddoomiyaha Baarlamaanka uu diiday soo jeedin ka timid Kheyre iyo Farmaajo oo aheyd in uu iska casilo xilka guddoomiyanimo.
Jawaari oo taageero ka helaya dowladda Imaaraatka Carabta iyo siyaasiyiin mucaarad ah ayaa ku adkeysanaya in aysan jirin sabab uu isku casilo wuxuuna si cad u sheegay in uu dhacay waqtigii loogu talagalay in cod lagu geliyo mooshinkii isaga ka dhanka ahaa.
Cabdi Wali Muudeey oo ah guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee Baarlamaanka oo ah Ninka Farmaajo iyo Kheyre u xilsaareen Afgambinta Jawaari ayaa berri isugu yeeray xildhibaanada waxaana lafilayaa in codka kalsoonida loo qaado Jawaari.
Warar soo baxay waxay sheegayaan in Jawaari uu saluugay lacago Malaayiin dollar ah oo loosoo bandhigay si uu uga tago xilka guddoomiyanimo, lacagtan oo qaab laaluush ahaan ay u diyaariyeen xafiisyada R/wasaaraha iyo Madaxweynaha ayaa lagu sheegay 7 Milyan oo dollar.
Dowladaha shisheeye ee taageero dowladda Federaalka ayaa ku guul darreystay cadaadisyo ay saareen madaxda dowladda oo ku aadanaa in ay khilaafka joojiyaan.
Dhinaca kale warar kala duwan ayaa kasoo baxaya diyaarado ay leedahay dowladda imaaraatka carabta oo maanta gelinkii dambe kasoo degay garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Diyaaradaha oo ay ilaalinayeen ciidamo ka tirsan dowladda Imaaraatka carabta ayaa siday boorsooyin lacago dollar ah oo xukuumadda Dubai ugu talagashay in ay ku maalgeliso taageerayaasheeda Soomaaliya.
Lacagta oo lagu sheegay 13 Milyan oo dollar ayaa lageeyay xarunta Bangiga dowladda Federaalka halkaas oo ammaankiisa si aad ah loo adkeeyay, warar laysla dhax marayo waxay sheegayaan in lacagtaan loo talagalay in lagu taageero Jawaari iyo siyaasiyiin UAE danaheeda ka shaqeynaya halka warar kale sheegayaan in lacagtaan loo qoondeeyay in mushaar looga dhigo sirdoonka DF-ka iyo ciidamada maamul goboleedyada.
Siyaasado isdiidan iyo jiha wareer dhanka amniga ah ayaa lagasoo sheegayaa xaafado katirsan magaalada Muqdisho oo ay maamusho Dowladda Federaalka, xafiisyada dowladda waxaa saameeyay arrinta khilaafka waxaana jirta kala qeyb sanaan saameysay shaqaalaha iyo madaxda DF-ka.